Mozilla iri kugadzirira kushandisa saiti kusarudzika | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla iri kugadzirira kushandisa saiti kusarudzika
Muzhinji, mawebhusaiti haakwanise kuwana data kubva kune mamwe masaiti web mubhurawuza kuburikidza nechero iwo mavambo mutemo.
Zvisinei, nzvimbo dzakaipa dzinogona kuedza kukanganisa mutemo uyu kuti urwise mamwe mawebhusaiti. uye apo neapo, mabugs ekuchengeteka anowanikwa mubrowser kodhi iyo inoshanda iyo imwechete yeKutanga mutemo.
Iyo Chrome timu inovavarira kugadzirisa izvi zvikanganiso nekukurumidza sezvazvinogona.
1 Mashandiro eSiti saiti anoshanda sei
2 Firefox ichaenda zviri pamutemo kuva yakasurukirwa ichichinjana.
Mashandiro eSiti saiti anoshanda sei
Inofanira kuyeukwa kuti Chrome yagara iine akawanda-maitiro ekuvaka uko matabhu akasiyana anogona kushandisa akasiyana maitiro ekupa.
Imwe tabu inogona kunyange kuchinja maitiro kana iwe uchienda kune imwe saiti mune dzimwe nguva. Zvisinei, zvaive zvichiri kugona kuti peji remurwisi agovane maitiro nepeji yemunhu akabatwa.
Semuenzaniso, muchinjikwa -saiti iframes uye saiti pop-ups kazhinji zvinoramba zviri mune imwechete maitiro seiyo peji rakavagadzira.
Izvi zvinobvumidza yakabudirira Spectrum kurwisa kuverenga data (semuenzaniso, makuki, mapassword, nezvimwewo) zvemamwe mafuremu kana pop-ups mune yako maitiro
Saiti yekuzvimiririra(Saiti yekuzviparadzanisa) ndeye Chrome chengetedzo ficha Inopa imwezve yekudzivirira kuitira kuti kurwiswa uku kusanyanya kuve nekubudirira.
Iyo inovimbisa kuti iwo mapeji emawebhusaiti akasiyana anogara achiiswa mune akasiyana maitiro, imwe neimwe inomhanya mubhokisi rejecha iyo inoganhurira izvo zvinogona kuita maitiro.
Izvo zvakare zvinodzivirira maitiro kubva mukugamuchira mamwe marudzi e data rakajeka kubva kune mamwe masaiti.
Naizvozvo, nekuzviparadzanisa saiti, zvakanyanya kuomera webhusaiti yakaipa kushandisa fungidziro dzedivi chiteshi kurwisa seSpecter kuba data kubva kune mamwe masaiti.
Kana kusarudzika kwenzvimbo kuchigoneswa, chiitiko chega chega chekupa chine zvinyorwa kubva pasiti inopfuura imwechete.
Izvi zvinoreva kuti ese magwaro mafambiro pakati pemasaiti anokonzeresa shanduko yetab mumabatiro. Izvi zvinoreva zvakare kuti ese macross-saiti iframes anoiswa mune yakasarudzika maitiro pane yavo huru furemu, vachishandisa kunze-kwe-maitiro iframes.
Firefox ichaenda zviri pamutemo kuva yakasurukirwa ichichinjana.
Mushure megore rekugadzirira zvakavanzika, Mozilla yakazivisa chinangwa chayo chekushandisa saiti yekuzvitsaura.
Chrome's saiti yekuzviparadzanisa chinhu chakagadzirwa senzira yekuchengetedza yeiyo Chrome browser makore asati aburitswa, asi kuitiswa kwayo kwakabatana nekuburitswa pachena kwevakakundikana veMeltdown uye Specter processor, iyo nzvimbo yekuzvitsaura yakaderedzwa zvizere.
Nika Layzell, anovandudza kuMozilla, akati hwaro hwakatangisa basa pane imwechete saiti yekuzviparadzanisa nzira. gore rapfuura sechikamu che projekiti ine yemukati kodhi zita Project Fission.
Kwegore rapfuura, tanga tichishanda kusimudzira iyo Fission base nekugadzira zvivakwa zvitsva. Mumavhiki anotevera nemwedzi, tichada rubatsiro rwezvikwata zvese zveFirefox kuchinjisa kodhi yedu kune yekumashure-Fission browser dhizaini.
Iyo post-Fission browser dhizaini iyo Layzell inoreva nezvayo yakafanana neiyo Chrome yazvino kushanda. Vagadziri veMozilla zvakare vanoronga kupatsanura yega yega webhusaiti iyo mushandisi yaanowana mune imwe nzira.
Iye zvino, Firefox inouya nehurongwa hwebrowser mushandisi interface uye mamwe maitiro (maviri kusvika gumi) yekodhi yeFirefox yekupa mawebhusaiti.
NeProject Fission, maitiro ekupedzisira aya anozoshandurwa uye maitiro akapatsanurwa achagadzirwa kune yega webhusaiti inowanikwa nemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla iri kugadzirira kushandisa saiti kusarudzika
Mashoko acho anoshamisa